टिममा कुशल नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ ? सहयोगी टिप्स - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips टिममा कुशल नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ ? सहयोगी टिप्स
टिममा कुशल नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ ? सहयोगी टिप्स
आफूले उद्धमशिलता वा कुनै पनि खालको काम सुरु मात्र गरेर हुँदैन। त्यसको लागि टिम आवश्यक पर्छ र त्यो टिमलाई आफूले कुशल नेतृत्व दिनु आवश्यक हुन्छ। कुशल नेतृत्वको लागि यहाँ सामान्य केही सुझावहरु राखिएको छ :
नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो टिमलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । र, त्यसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, आफू अनुशासनमा रहनु ।
काम अर्हाउने मात्र नगर्नुहोस् । आफूले काम गरेर उनीहरुलाई कामप्रति जिम्मेवारीबोध गराउनुहोस्।
आफूभन्दा तल्लो व्यक्तिसंग बोल्दा, आफ्नो मान घट्छ, भन्ने नसम्झनुहोस्। सबैसंग आत्मिय व्यवहार गर्नुहोस् र उचित संचारको माध्यम रोज्नुहोस्।
जिम्मेवारी दिंदा उनीहरुलाई त्यससंग सम्बन्धित केही अधिकार पनि दिनुहोस्।
टिमका सदस्यहरुका लागि कामको उचित वातावरण छ की छैन, बुझ्ने गर्नुहोस् ।
समयलाई आफूले पनि महत्व दिनुका साथै उनीहरुलाई पनि त्यसको बोध गराउनुहोस्।
उनीहरुको अगाडी आफू खुल्ला तरिकाले कुरा र व्यवहार गर्नुहोस् , तर आफ्नो पदको मर्यादाको पनि ख्याल राख्नुहोस् ।
सधै कोही पनि सही हुँदैन । त्यसैले आफ्नो लागि कोही विश्वासिलो र अनुभवी सल्लाहकार राख्नुहोस् ।
साधारण गल्ती र ठूला गल्तीहरुको फरक फरक तरिकाले समाधान गर्नुहोस् ।
आफ्नो ठूलो लक्ष्य प्राप्तिको लागि त्यसभित्र साना-साना लक्ष्य बनाउनुहोस् र ती लक्ष्यमा उनीहरुको लागी उपलब्धि तथा फाइदा जोडिदिनुहोस् ।
सम्पन्न काम आफ्नो लक्ष्य, टिमको प्रदर्शनलाई मापन गर्नुहोस् र सोही अनुसार आवश्यक निर्णय लिनुहोस् ।
कामसंग सम्बन्धित कुराहरुको सबै निर्णय आफूले मात्र लिने नगर्नुहोस् । टिमको मिटिंग राखेर उनीहरुको विचार राख्ने समय दिई उनीहरुलाई पनि निर्णय लिने प्रक्रियामा समावेश गर्नुहोस ।
आफूले गरेका प्रत्येक गल्ती र त्यसले निम्त्याएको परिस्थति, समाधानको उपाय सम्झनुहोस वा टिपोट गरेर राख्नुहोस् । गल्ती नदोहोर्याउने प्रयास गर्नुहोस् ।
पैसा सबैथोक होइन । तर, पैसाको महत्व बुझ्नुले जीवन सहज हुन्छ र काम लयमा जानसक्छ भन्ने याद राखीराख्नुहोस्। आर्थिक अनुशासनलाई ध्यान दिनुहोस् । खर्च, आम्दानीको सही हिसाब किताब राख्नुहोस् ।
आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिनुहोस् । आफूलाई नयाँ प्रविधि तथा समाचारहरुसंग अपडेट राख्नुहोस् । हरेक दिन केही नयाँ सिक्ने प्रयास गर्नुहोस् । प्रतिस्पर्धीहरुले के र कसरि काम गरिरहेका छन्, बजारमा के चलिरहेको छ भन्ने जस्ता कुराको जानकारी राख्नुहोस् ।
Previousअंग्रेजी भाषा छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी सिक्न सकिन्छ ? केही टिप्स
Nextके तपाईं स्मार्ट हुनुहुन्छ ? यस्ता हुन्छन् स्मार्ट व्यक्तिका बानी